Nairobi:-Waxaan idinka soo gudbineynaa Khudbadii Jimacaha Masjidka Abu Bakar ee magaalada Nairobi waxaana Khudbada jeediyey Sheekh Maxamed Cabdi Umal waxaana uu khudbadiisa uga hadlay Qaar kamida Axka
Wasaaradda Awqaafta JFS oo sheegtay beri ah ay tahay maalinta 1aad ee bisha Ramadaan.
Muqdisho:-Wasaaradda Awqaafta iyo Diinta ee JFS ayaa shaacisay in maalinta beri ah ay tahay maalinta 1aad ee bisha Ramadaan. Xoghayaha Joogtada ee Wasaaradda Awqaafta iyo Diinta Sheekh Maxamed Kheyrow
Puntland oo maanta shaacisay in maalinimada berito oo kubeegan 27 May 2017 ay tahay maalinta koowaad ee bisha barakaysan ee Ramadaan.
Boosaaso:-Wasiirka wasaarada Cadaalada dawladda Puntland Saalax Xabiib Xaaji Jaamac oo ugu horay ku dhawaaqay xaqiijinta in maalinimada berito ay tahay maalinta koowaad ee bisha ramadaan ayaa sheegay
Guddiga Gurmadka Abaaraha Soomaaliya oo Puntland ku wareejiyey lacag dhan $200,000.[Masawiro]
Garoowe:-Madaxweyne kuxigeenka Dawladda Puntland ahna kusimaha Madaxweynaha Egn. Cabdixakiin Xaaji Cabdulaahi Cumar Camey oo maanta 26 May 2017 qado sharaf ugu sameeyey magaalada Garoowe gaar haan hot
Gudiga Jimciyadda Wanaag Faridda iyo Xumaan reebida oo baaq u jeediyey shacabka Soomaaliyeed.[Masawiro/Video]
Garoowe:-Gudiga sare ee Jimciyadda wanaag farridda iyo xumaan reebidda Puntland oo Garoowe shir jaraa’id ku qabtay ayaa ugu baaqay walaalaha Muslimiinta ah inay ka qayb qaataan afurinta walaalohooda